ဒဿန ခရီးစဉ်: 5/1/09 - 6/1/09
သတိရချိန်... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
ဒယ်အိုး ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ...
Posted by monk at 5/31/2009 01:10:00 PM No comments:
ငါ့ကြည့်နေ... (ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (မေး-ဖြေ))
ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (မေး-ဖြေ) ၁-မှ...
Posted by monk at 5/31/2009 12:37:00 PM No comments:
သာသနာ့အမွေ... (တည်တောဆရာတော် (မေး+ဖြေ))
တည်တောဆရာတော် (မေး+ဖြေ) ၅-မှ...
Posted by monk at 5/30/2009 03:05:00 PM No comments:
Labels: တည်တောဆရာတော် (မေး+ဖြေ)
ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
Posted by monk at 5/29/2009 07:18:00 PM No comments:
မြတ်ဗုဒ္ဓအား ညနေပိုင်း စားစရာကပ်လှူခြင်း...
28 May 09, 07:40
Unknown: အရှင်ဘုရား သစ် သီး ဆွမ်း ကို ဘုရား တွင် မွန်း လွဲ ပိုင်း (သို.) ညပိုင်း အချိန်တွင်ကပ်လှူ သင့်ပါ သလား?
lknt: မေးခွန်းလေးကတော့ တိုပါသည်... သို့သော် အဖြေတွေမှာတော့ အမြင်တွေမရှင်းကြပါ... အမှန်မမြင်နိုင်သည့်အတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ သံသရာ လည်နေကြရပေသည်...။ ယခုရေးသားသည်ကား ကျွန်ုပ်အယူသာ... မနှစ်သက်သူများလည်း မိမိဆန္ဒအတိုင်းသာ... ဤစာကို အများအတွက် ရှင်းလင်းစေရန် ရည်မှန်း၍ ရေးသားပါသည်... ပိုရှုပ်သွားလျှင် ကျွန်ုပ်၏ အရေးအသား အတွေးအခေါ် ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ပါ...။
ကပ်= လှူသူနှင့်ရဟန်း နှစ်တောင့်ထွာ အတွင်းမှ ပေးခြင်းယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...
လှူ= ပေးကမ်းခြင်း လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...
မလှူသင့်သော ၀တ္ထုများ အရင် သိထားသင့်ပါတယ်...
၁... ကချေသည် အငြိမ့်ဇာတ်ပွဲ အလှူ...
၂... သေရည်အရက် အလှူ... (လူတွေ အမြဲ လက်ဆောင်ပေးနေကြသည်)
၃... မိန်းမ အလှူ...
၄... နွားမများထံ နွားထီးလွှတ်ခြင်းမျိုး အလှူ... (မည်သည့်သတ္တ၀ါမဆို မျိုးစပ်ခြင်း)
၅... ကာမဂုဏ်ကို နှိုးဆွပေးသော ပန်းချီ ဓါတ်ပုံ ရုပ်သံ အလှူ...
၆... လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက် အလှူ...
၇... အဆိပ်အလှူ၊ သတ္တ၀ါတို့သေစေရန်...
၈... လက်ထိပ် သံခြေချင်း ချုပ်နှောင်ရန် နှောင်ကြိုး အလှူ...
၉... ကြက် ၀က် သားကောင် အလှူ...
၁၀... ချိန်စဉ်းလဲ တောင်းစဉ်းလဲ အလှူ...။
မြတ်စွာဘုရားနှင့် သံဃာတော်များသည် ညစာ မစားသုံးကြပါ... ထို့ကြောင့် ညနေစာ ကပ်လှူခြင်းသည် မသင့်လျှော်ပါ... ညဂျင်းသုတ် ကပ်လှူခြင်းသည်လည်း မအပ်စပ်ပါ... သစ်သီးများလည်း မလှူသင့်ပါ... စားစရာမှန်သမျှ မလှူသင့်ပါ...။ လှူသည်ဆိုရာမှာ ရဟန်းသံဃာဆိုလျှင် လက်ထဲသို့ ထည့်၍ကပ်လှူခြင်း... မြတ်စွာဘုရားကို ညနေစာအနေနဲ့ ကပ်လှူခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်...။
ဒါ့ကြောင့် စားစရာများ ညနေ မကပ်သင့်ပါ...။
တစ်နေရာရာတွင် ထားခဲ့မည် လှူမည်ဆိုပါက အပြစ်မရှိပါ... လှူနိုင်ပါတယ်...။
ဒကာဒကာမတို့ ညနေပိုင်းကျောင်းသို့လာ၍ ဆွမ်းဂျိုင့်ကိုလှူပါမယ်... ဘုန်းတော်ကြီးလက်ထဲ မထည့်ပဲ သင့်တော်ရာနေရာ လုံခြုံရာနေရာ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထည့်ထားခဲ့ပါမယ်... သင်တို့မှာလည်း အပြစ်မရှိပါ ဘုန်းကြီးမှာလည်း အပြစ်မရှိပါ...။ နောက်တစ်နေ့ ကပ္ပိယမှနေ၍ အပ်စပ်အောင် လှူဒါန်းပါလျှင် ဘုန်းပေး သုံးဆောင်၍ ရပါတယ်...။ ဘုန်းကြီးမှ ကိုယ်ဟာကိုယ်ယူ၍ မစားရပါ စားလျှင်တော့ အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်...။ ပေးလှူသူနှင့် မဆိုင်ပါ...။
ညနေပိုင်း ဘုန်းကြီးလက်ထဲသို့ ထည့်လှူမည် ဘုန်းကြီးမှလည်း လက်နှင့်ကိုင်၍ အလှူခံမည်ဆိုလျှင်တော့ ဘုန်းကြီးမှာ အပြစ်ရှိပါတယ်...။ အပြစ်ရှိသည်မှန်းသိလျှက် လှူလျှင် လှူသူမှာလည်း အပြစ်ရှိပါတယ်...။
လှူလိုသော စားစရာပစ္စည်းများကို ဘုန်းကြီးရှေ့က စားပွဲပေါ်မှာ ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင်ကော... ထားရုံထားခဲ့သည့်အတွက် အပြစ်မဖြစ်သေးဟု ယူပါတယ်... ဒါပေမဲ့ အမြင်မတော်သော အမှုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။
ဒီနည်းအတူ ကျောင်းကို ညနေပိုင်းမှရောက်လာတဲ့ ဒကာများက ပါလာတဲ့သစ်သီးကို သူ့စိတ်ထဲက မနက်ကျမှ ကျောင်းမှာရှိတဲ့လူက ဘုရားကို ကပ်လိမ့်မယ်... ခုငါက ဘုရားစင်ပေါ် တင်ရုံတင်ထားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ဆိုရင် အပြစ်မဖြစ်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ်... အမြင်မတော်သောအမှု အပြစ်လောက်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။
သို့မဟုတ် အချိန်အခါမဟုတ် လှူဒါန်းသည့်အတွက်တော့ အကျိုးပေး အားနည်းတတ်ပါတယ်...။
လိုအပ်နေချိန်မှာ လိုတာမရ... မလိုအပ်ချိန်ကျမှ ရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်...။
ဆီးချိုရောဂါဖြစ်မှ အချိုရည်တွေ သေတ္တာလိုက် ရနိုင်ပါတယ်...။
အိမ်မှာနေပြီး အသီးစိမ်းတွေ မှည့်အောင် ဘုရားစင်ပေါ် ၃-၄ ရက်ထား... မှည့်တော့မှ ယူ၍စား ဆိုတာမျိုးကတော့ အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်... ဈေးဆိုင်မှာ သစ်သီးရွေးသလို ဘုရားစင်ပေါ်မှာ ရွေးခြယ်နေခြင်းကလည်း မသင့်တော်ပါ...။ ဆွမ်းကိုလည်း မနက်ပိုင်းတင်ကပ်ပြီး မွန်းလွဲတာနဲ့ စွန့်သင့်ပါတယ်... အချိန်ရလျှင် အသီးများ ခွဲစိတ်ပြီး လှူခြင်းသည် ကုသိုလ်တစ်ခုတိုးစေပါတယ်...။ နဲတာများတာ မပြောလိုပါ မိမိတတ်နိုင်သလောက် လှူနိုင်ပါတယ်... လှူသူ၏ စေတနာအလျှောက် အကျိုးတွေပေးပါလိမ့်မယ်...။ အချိန်မရလျှင်လည်း အလုံးလိုက် လှူနိုင်ပါတယ်...။ ဘုန်းကြီးကိုလည်း ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် အလုံးလိုက်လှူမယ်... ခြင်းလိုက်လှူမယ်... တောင်းနဲ့လှူမယ် ရပါတယ်...၊ ဘုန်းကြီးက အသီးအလုံးလိုက်ကို လက်နဲ့မကိုင်ပဲ အလှူခံခွင့်ရှိပါတယ်... ပြီးနောက် နံနက်ပိုင်းမှာ အပ်စပ်အောင်လုပ်၍ ဘုန်းပေးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်...။ သစ်သီး အလုံးလိုက် မလှူရဆိုသော စကားတော့ မတွေ့မိသေးပါ...။ (မနှံ့စပ်၍လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
ဆွမ်းတော်ကပ်ပြီး အလုပ်သွားသူများ ကျောင်းသွားရသူများမှာ တချို့ ညနေကြမှ ပြန်ရောက်နိုင်တာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်... သူတို့၏စိတ်ထဲမှာ မြတ်စွာဘုရား ညစာပါ စားတာပဲလို့ အမြင်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် အပြစ်မရှိပါ...။ ခုချက်ခြင်း ဘုရားလှူ အလုပ်သွားမှာမို့ ခုချက်ခြင်းစွန့် ဆိုသည်မှာလည်း မသင့်တော်ဟု ထင်ပါတယ်...။
စိတ်သာရှင်စော ဘုရားဟော ဆိုသည်နဲ့အညီ...
မိမိတို့စိတ်တွေ ဖြူစင်စွာနဲ့ ပြုလုပ်နေဖို့ လိုပါတယ်...
အမှားလေးတွေ နည်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်..
အမှားတွေ နဲနိုင်သမျှ နဲကြပါစေ...
အမြင်မတူ ညှိကြရုံသာ... အမှားမြင်ရင် ပြင်လိုက်ရုံပါ..
Posted by monk at 5/29/2009 04:29:00 PM No comments:
ယောက်ျားမြတ်၍ မိန်းမယုတ်သလော... (ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (မေး-ဖြေ))
ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (မေး-ဖြေ) ၆-မှ...
Posted by monk at 5/29/2009 06:39:00 AM No comments:
မနှောင်းစေနဲ့... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
Posted by monk at 5/27/2009 08:11:00 PM No comments:
ဤကဲ့သို့ ဒုက္ခမျိုးကို... (သင်္ဂဇာဆရာတော် စကားပုံပေါင်းချုပ်)
သင်္ဂဇာဆရာတော် စကားပုံပေါင်းချုပ်... ၁၀၃-၁၁၃
၁၀၃... ဤကဲ့သို့ ဒုက္ခမျိုးကို တိုးတက်ခံစားချင်လှသည် ဟူသော ဥပမာဖြင့်...
၁၀၄... ပြဿဒါးနေ့ထွက်၍ လှေပျက်ရာမှာ ရှိပါစေတော့ ရက်ရာဇာရွေးတဲ့ မင်းတို့ဘထွေး ဘုန်းကြီးမှာ...
၁၀၅... ကြက်သားဟင်းတစ်ခွက် ပေးဘူးရုံနှင့် ကျေးဇူးဂုဏ်အနန္တ ကျေနိုင်ပါ့မလား...
၁၀၆... လူကတော့ ပြာတာအလုပ်နှင့် မြို့အုပ်ထင်တဲ့ ငဖိုးကြာလိုဟူသော ပမာစကားဖြင့်...
၁၀၇... ထွန်ကိုင်းတပ်ပုံ အလွန်ရူးသောကြောင့် ထွန်မစူးသည် ဟူသော ပမာကိုပေး၍...
၁၀၈... မင်းတို့ ကံဒွါရ နှစ်မျိုးရှုပ်တာက ဖိုးတရုတ် ဖက်ရောင်းသွားသလို ဟူသော ထုံးစကားဖြင့်...
၁၀၉... မောင်သုတမှာ သင်္ကန်းကို လူခိုး၍ မုဆိုးမကြီး ငွေ ငါးကျပ်ပျောက်သလို မဖြစ်ပါစေနှင့်ဟူသော...
၁၁၀... ပုသိမ်နှင့် မော်လမြိုင် အပြိုင်ပင့်ကြသဖြင့် နေနှင့်လကဲ့သို့ကျင့်၍ ခွင့်သင့်ရာ လိုက်မည်ဟု...
၁၁၁... မင်းလျှောက်သည့်စကားက တောရွာသားမောင်တရုတ်နှင့် စံအုပ်တို့ အုန်းဆိုသလို...
၁၁၂... ဘိုးသူတော် ကိုရွှေကြာနှင့် သီလရှင်မယ်ခါတို့ ကဗျာနှင့် လူပျိုစကားပြောသလို ...
၁၁၃... တရားဟောကောင်းလှသဖြင့် ကျောင်းအမ တေးဆို၍ ကလေးလိုကသည် ဟူသကဲ့သို့...
Posted by monk at 5/27/2009 05:27:00 AM No comments:
တနေ့စာအလွဲများ... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
Posted by monk at 5/26/2009 03:21:00 PM No comments:
မေတ္တာဆိုတာ ရောင်ပြန်ဟပ်တယ်... ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (မေး-ဖြေ)
ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (မေး-ဖြေ) ၉-မှ...
မေတ္တာဆိုတာ ရောင်ပြန်ဟပ်တယ် မေတ္တာစူးရှတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပါလဲ ဘုရား...
Posted by monk at 5/26/2009 10:40:00 AM No comments:
ယောက်ျားမြတ်၍ မိန်းမယုတ်သလော... (ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇေ...
ဤကဲ့သို့ ဒုက္ခမျိုးကို... (သင်္ဂဇာဆရာတော် စကားပုံပေါင...
မေတ္တာဆိုတာ ရောင်ပြန်ဟပ်တယ်... ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ ...
အမေနှင့် စကြ၀တေးမင်းတို့ တွေ့ဆုံခြင်း... (အရှင်အာစ...
အသက်နဲ့ထပ်တူ... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
ဟောပြောရကျိုး... (တည်တောဆရာတော် (မေး+ဖြေ))
နီပေါနိုင်ငံ... (မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ ပုံတော်သမိုင်း)
တပည့်လိမ္မာ ဆရာအာပတ်လွတ်ဆိုတာ ရှင်းပြပါဘုရား... (ဓမ...
သက်ဆိုင်သူသို့... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
သီလဆိုသည်မှာ... (တည်တောဆရာတော် (မေး+ဖြေ))
စောင့်ရှောက်တတ်သူ... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
အသက် ၀ိညာဏ် လိပ်ပြာ... (တည်တောဆရာတော် (မေး+ဖြေ))
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပုံတချို့... (မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ ပုံတော်...
အကျွန်ုပ်၏နှုတ်ကို ထိန်းကွပ် စောင်မတော် မူပါစေသတည်း...
၇၀... အရှင်ဇမ္ဗုက၀တ္ထု... (ဓမ္မပဒဝတ္ထု (မာဏဝ)) ၇၀-၇၅
ဗုဒ္ဓအလိုကျဒါနပြုနည်း... (အရှင်ဇ၀န) vcd
တတိယသံဂါယနာတင် ပုံပြင်မဟုတ်ပါ သမိုင်း...
တပည့်တော် စောင်းဟောတယ် ပြောမှာပဲဘုရား... (ဓမ္မဒူတ အ...
အထိုင်တရားတော်... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
ရေမြေ့ရှင်မင်းတရားကို ချီပါသားနှင့် ပုံပြုလျှက် .....
ဘုရားရှင်၏ ရိုက်ခြင်း သတ်ခြင်း... (တည်တောဆရာတော် (...
လူများ ၀ိနည်းကို လေ့လာသင့်ပါသလား... (ဓမ္မဒူတ အရှင်ပ...
တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်ဖြူးဇီး ဘုရားကျောင်းဆောင်... (မြတ...
မူကြိုကျောင်းသားပါ...၃ (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
ကုသိုလ်ကောင်းမှု အတူတူမပြုရပါ... (ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇေ...
သြော်...ဓမ္မကထိက... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
ရဟန်းက လူကို တောင်းပန်ကောင်းပါသလား... (ဓမ္မဒူတ အရှင...
ကြောက်ရင်လွဲရဲရင်မင်းဖြစ်... (အရှင်ဇ၀န) vcd
ကျမ်းဂန်လာ သတ္တ၀ါအချို့၏ ရုပ်ပုံလွှာ... (တည်တောဆရာတေ...
စာရွတ်ပုံ လမ်းမမှန်သဖြင့်... သင်္ဂဇာဆရာတော် စကားပုံေ...
ဒုတိယသံဂါယနာတင် ပုံပြင်မဟုတ်ပါ သမိုင်း...
တရားနာရခြင်းအကျိုး... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
မာဂဓတိုင်း... ရာဇဂြိုဟ်မြို့... (တောင်ပေါက်ဆရာတော်)
ထိုင်ပြတယ်တဲ့ဘုရား... (ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (မေး-ဖြေ))
စားကြွင်းစား... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
သုပ္ပဗုဒ္ဓနူနာသည်... (ဓမ္မပဒဝတ္ထု (မာဏဝ)) ၆၆-၆၉
ဓမ္မအရိပ်မှာ ခိုကြစို့... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
အကျင့်ပျက် အဖျက်သမား... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
မယားရှိသူနှင့် ဒုလ္လဘရဟန်း... (တည်တောဆရာတော် (မေး+ေ...
ဆေးကောင်းရင် သန်းခေါင်း... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
ဘိက္ခုနီ ဝိနိစ္ဆယ စာတမ်း အစအဆုံး... ၁-၈၀
တောထွက်ရဟန်းကြီး၏ ၀ါသနာ အမှုကို... (သင်္ဂဇာဆရာတော် စက...
လွတ်အောင်လွှတ်... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
တပည့်တော်ယခင်ကဆို ... (ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (မေး-ဖြေ))
အရှင်ဉာဏဓဇ... ထေရုပ္ပတ္တိ... (လယ်တီ)
ဘာအမြတ်ဆုံးလဲ... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
ပထမသံဂါယနာတင် ပုံပြင်မဟုတ်ပါ သမိုင်း...
ကုန်သည်ကောင်း... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
သရဏဂုံ... တည်တောဆရာတော် (မေး+ဖြေ)
လုပ်ချင်တာ မလုပ်ကြနဲ့... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
အမျိုးသမီးများအဖို့ ဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားလွန်းလှပါတယ်...
တန်ခိုးဆိုသည်မှာ... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd
နီပေါနိုင်ငံမှ... (မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ ပုံတော်သမိုင်း)
ရှင်သာမဏေပြုနည်း... (တည်တောဆရာတော် (မေး+ဖြေ))
ခုတော့ဟုတ်တယ်... (ဦးသုမင်္ဂလ) vcd